Taariikh nololeedka Cali Khaliif Galeyr | KEYDMEDIA ONLINE
Taariikh nololeedka Cali Khaliif Galeyr
Allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Jig-jiga ku geeriyoodey siyaasiga Cali Khaliif Galeyr oo mar soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka, sidoo kalena soo noqday madaxweynihii Maamulka Khaatumo State.
Cali Khaliif ayaa ku dhashay magaalada Laascaanood, sanadka markii uu ahaa 1942-kii.
Waxa uu waxbarashadiisii kusoo qaatay dusgiga lagu magacaabo Sheekh, isaga ka baxay jaamacadda
Cali Khaliif Galeyr, waxaa uu ku dhashtay magaalada Laascaanood 1941. Cali Khalif waa shakhsiyad caan ah oo xilal badan kasoo qabtay dalka iyo dibadda, B.A (Honors) Boston University, Boston, M.A. sanadkii 1965-tii.
Waxaa M.A kasoo qaatay Jaamacadda University, Syracuse, N.Y sanadkii 1969-kii. isla Jaamacaddaas ayuu ka qaatay shahaadad ugu sareysa dunida ee loo yaqaano PH.D Syracuse University, Syracuse, N.Y 1972-dii.
Cali Khaliif ayaa qabtay shaqooyin badan, kuwaasi oo kala ah:
Cali Khaliif ayaa waxaa deegaanka Saax-dheer ee Sool loogu doortay Madaxweynimada Khaatumo 14-08-2014.
Waxaa 28-08-2014-ka ayaa loo dhaarinayaa xilka madaxweynimada Khaatumo State.